Akụkọ Ochie Greek mgbe ochie ghọrọ oghere nke oge a - Age Of Troy. - jluis37.com
Ndị na-egwu egwu na Novomatic casinos online ga-enwe ohere ịnweta aha EGT oghere Age Of Troy. Na-ejikọkarị ọtụtụ egwuregwu EGT na Novomatic nyefere, ọ na-egosipụta ihe osise zuru ezu na agba agba; na aha a, ha na-arụrụ ọrụ ịkọ akụkọ akụkọ banyere Paris, isi nke Troy, na ịhụnanya ezuru ya Helen, nwunye nke Eze Agamemnon nke Gris.
Afọ iri nke sochiri ọdịda ha hapụrụ nnukwu ngwongwo Troy n’aka ndị Gris na-emeri, na Age Of Troy na-enye ndị egwuregwu ụdị akụnụba a, maka njikọta akara ngosi ziri ezi. Aha nwere okpukpu ise na-egosipụta windo atọ ọ bụla, na 20 na-akwụ ụgwọ akwụ ụgwọ. Ndị na-egwu egwu nwere ike ịgba 1, 2, 5, 10 ma ọ bụ 20 akwụmụgwọ kwa ahịrị, maka nzọ pere mpe nke egwuregwu 20 na karịa 400.
Gbasasịkwa na Anụ ọhịa nakwa Okwu
Age Of Troy Scatter bụ ụlọ nsọ oge ochie, ọ bụ ezie na ọ nweghị ihe nrite maka ngwakọta nke aka ya, okpukpu atọ na windo ọ bụla na-esi na ya ga-ebute gburugburu 12 n’efu, n’oge nke Wilds tozuru oke na-abawanye mmeri. Enwere ike ịgbanye mkpụrụ ego ndị a n’efu site na Scatters atọ ọzọ n’oge agba gburugburu.
The Age Of Troy Wild abụghị, ihe ijuanya na ọ bụ Trojan a ma ama, nke gosipụtara ọdịda Troy. O nweghi uru ọ bụla maka njikọta ya, mana ọ na-arụ ọrụ nke ọma dị ka onye nnọchi maka akara ọ bụla ọzọ na-abụghị Scatter. N’oge agba gburugburu, mgbe Wilds tojupụtara, ikike ya ịmepụta ọtụtụ mmeri paylines n’otu oge na-abawanye.
Kaadị Jackpot Na-enye Ndị Na-enwe Ọganihu na Random
Ejikọtakwara Age Of Troy na netwọkụ Jackpot Cards, yabụ otu n’ime jackpots anọ na-aga n’ihu bụ ohere ọ bụla n’oge egwuregwu. Enwere mita anọ n’elu Age Of Troy reels, nke na-egosi jackpots anọ na-aga n’ihu, nke ọ bụla ejiri uwe dị iche iche mara, ka ha na-arịgo dịka ọnụọgụ nke ndị egwuregwu na-arụ ọrụ na netwọk.
A Jackpot Cards bonus nwere ike ịmalite na aghara aghara mgbe ọ bụla Age Of Troy spin. Ọ bụrụ na arụ ọrụ ya, egosiri na ihe ọkpụkpọ nhọrọ nke kaadị ihu ala, ma họrọkwa atọ n’ime otu uwe ahụ iji merie jackpot na-aga n’ihu nke metụtara uwe ahụ.
Dị Ọcha, Crisp na Yi Artwork
Enwere ọkụ, oge anwụ na-acha na agba na aghụghọ eji na Age Of Troy, na-elekwasị anya na mmekọrịta ịhụnanya dị n’etiti Helen na Paris karịa agha ọbara ha kpasuru iwe. Naanị akara ngosi poker ka eji: Q, K na A. A na-asụgharị ha dị ka nkọ, mkpụrụedemede angular na-echetara geometry Euclidian, ma na-akwụ ụgwọ nha anya nke 5, 20 ma ọ bụ 100 kaadị maka ụdị atọ, anọ ma ọ bụ ise.
Oghere dị n’ịntanetị dị ka ịkụ nzọ egwuregwu na ntaneti USA. Akara ndị Gris na cornucopia na-awụfu mkpụrụ ego ọla edo na-ekerịta ụkpụrụ kwekọrọ: 10, 50 ma ọ bụ 200 Ebe E Si Nweta. Okpu agha na agha agha nke ndị Gris bụ ndị na-esote akara ngosi, nke ọ bụla na-enweta akara 20, 100 ma ọ bụ 400, na-esote Helen, onye meriri akara 50, 150 ma ọ bụ 500. Paris na-akwụ ihe nrite maka ụdị abụọ: akwụmụgwọ 10, wee nweta kredit 50, 200 ma ọ bụ 1,000 maka egwuregwu atọ, anọ ma ọ bụ ise.